Mpanamboatra sy mpamatsy Spectrum feno | China Full Spectrum Factory
Vokatra feno fahaiza-miasa mamirapiratra feno
Famaritana momba ny vokatra Ny latabatra miaro ny maso amin'ny jiro LED LED dia nampihena ny tahan'ny hazavana fohy amin'ny alàlan'ny herinaratra manga amin'ny alàlan'ny famenoana ny lesoka spectral amin'ny hazavana manga-turquoise, izay manatsara ny fahasimban'ny retina maso ary manatsara ny fifantohana. Ary ny fahombiazan'ny fandokoana loko (Ra = 97 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) dia mahatonga ny olona hahatsapa ho mahazo aina kokoa sy hahazo ny fiainany bebe kokoa. Endri-javatra lehibe ● Fiarovana amin'ny maso ● Fanondroana fandokoana loko ambony ● Mampiroborobo ny fahatsiarovan-tena sy ny fifantohana isa Isa R ...
Fiaraha-miasa feno fitoviana feno Ra98 Kaleidolite andiany
Famaritana ny vokatra Ny andian-tariby LED KaleidoliteTM (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) dia manana spectrum mitovy amin'ny loharano hazavana voajanahary toy ny masoandro sy hazavana manjelanjelatra, izay manana fananana avo lenta amin'ny fahatokiana avo lenta, gamut miloko malalaka ary loko feno voky. Izy ireo dia manampy amin'ny fanatrarana fandokoana loko tsy misy sorona ny fahombiazan'ny lumen, ny fahamendrehana ary ny vidiny. Fampiharana amin'ny jiro fanabeazana sy ara-barotra, fivarotana antsinjarany, galeria, hopitaly ary koa jiro ao an-trano. Key ...
Jiro studio index TLCI avo
Product Description Ny andian-jiro LED jiro studio (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) miaraka amin'ny CRI avo, ny fahamendrehana ary ny gamut miloko izay manatsara ny fisehoan'ny zavatra amin'ny alàlan'ny famelana ny loko hiseho mazava sy mazava amin'ny fitifirana fakantsary. Ny indostrian'ny jiro fahitalavitra ambony dia manome antoka ny fahombiazan'ny loko tsara amin'ny efijery fampisehoana. Endri-javatra manan-danja ● Index CRI / Rf / Rg avo (TM-30-15) ● R1-R15> 90 ● Index TLCI avo lenta momba ny vokatra Isa-na isaina isaina ...
Kalitao avo lenta miaraka amin'ny fandokoana loko tsara kokoa
Famaritana ny vokatra Ny andian-tsarin'ny masoandro mitahiry CRI avo sy ny fahamendrehana ambony amin'ity andiany ity dia mamerina ny tena lokon'ny vokatra, ary ny lozam-pifamoivoizana manga kely dia miaro ny maso sy ny fahitana amin'ny fomba mahomby. Ho fanampin'izany, ity andian-dahatsoratra ity ihany koa dia misy spectrum hazavana volomparasy, izay mitana andraikitra tena tsara sy mahomby amin'ny filan'ny zavamaniry sy ny bakteria. Endri-javatra lehibe ● Fahamendrehana miloko avo Rf ● gamut miloko tsara Rg ● Latsaky ny jiro manga manimba Product Number Isaina valiny [V] Misy naoty ankehitriny [mA] CC ...